Axmed Madoobe: Qof kasta oo Soomaaliyeed hamigiisu waxaa uu ahaa doorasho Qof iyo Cod ah – Kalfadhi
July 13, 2020 Hassan Istiila
Madaxweynaha Dowlad-Gobolleedka Jubbaland Mudane Axmed Maxamed Islaam oo khudbad ka jeedinayay shirkii wada-tashiga maamul-gobolleedyada ee ka dhacay magaalada Dhuusomareeb ee Caasimada Galmudug, ayaa sheegay in qof walba oo Soomaaliyeed hamigiisu uu ahaa in la gaaro doorasho Qof iyo Cod ah, haddii taasi la gaari waayo looma fariisanayo oo wax walba oo la gaari karo ayaa la qabanayaa.
“Waxaa hubaal ah oo aan laheyn meel looga wareego, in markii la dhisayay Guddiga doorashooyinka iyo markii ka horreysayba, waxaa laga hadlayay doorasho hal qof iyo hal cod in la gaaro, waana hamiga qofka Soomaaliyeed uu ku fakarayay in la gaaro. Haddana mar walba waaqaca ayaa runta sheegayay, inta taa la gaarayo waa in ay qabsoomaan wax badan oo ka horeeyay”.
Mudane Axmed Maxamed Islaam, ayaa sheegay in 2016-ddii aad culeeska loo saarayay in ay dhacdo doorasho Qof iyo Cod ah, haddana wakhtigii adkaa iyo xaaladdii dalka ayaa keentay in taasi ay socon weydo, maanta ujeedada shirkan waa in la wada-tashado.
Madaxda maamul-gobolleedyada ayaa sheegay in tubta farsamo ee qabsoomidda doorashada Dalku ay noqoto mid taladeeda loo dhan yahay, nooc ahaanna ku dhici karta muddo xiliyeedka harsan, taas oo daliil u ah in doorasho Qof iyo Cod ah aysan ka dhici karin dalka marka loo fiiriyo muddada harsan.
Guddoomiyaha Aqalka Sare oo soo dhoweeyay war-murtiyeedkii kasoo baxay shirkii wada-tashiga maamul-gobolleedyada